OneLocal: Otu Suite nke Ngwa Ngwaahịa maka Azụmaahịa Obodo | Martech Zone
OneLocal bu ulo ahia nke eji eme ahia maka ime obodo ka inweta otutu ndi ahia, ndi na ede ihe, ya na - eto eto. Ihe ikpo okwu a lekwasịrị anya n'ụdị ụlọ ọrụ ọrụ mpaghara ọ bụla, gbasara ụgbọ ala, ahụike, ahụike, ọrụ ụlọ, mkpuchi, ezigbo ụlọ, ụlọ ahịa, spa, ma ọ bụ ụlọ ahịa mkpọsa. OneLocal na-enye ụlọ ọrụ iji dọta, jigide ma kwalite obere azụmaahịa gị yana ngwaọrụ maka akụkụ ọ bụla nke njem ndị ahịa.
Ngwaọrụ igwe ojii nke OneLocal na-enyere gị aka ịnye ahụmịhe kachasị mma na klas, na-ejikọ gị na ndị ahịa n'ụzọ bara uru karị. Ezubere ngwaọrụ ọ bụla iji rụọ ọrụ n'adabereghị, mana mgbe ejikọtara ọnụ, ha na-enye akpaaka zuru oke iji kpalite uto ego na-echekwa ma chekwaa oge gị. Enweghị akụrụngwa ma ọ bụ oge ntọala achọrọ, naanị nbanye ma lelee ọrụ OneLocal maka azụmahịa gị.
The OneLocal Suite nke Ngwaahịa gụnyere:
Nyochaa - nakọtara ma chịkọta nzaghachi ndị ahịa gị ma mepụta nyocha ndị ọzọ n'ịntanetị.
NtughariMagic - mejuputa ire okwu onu, belata mmefu ahia ma bulie onu ahia.
Kpọtụrụ - CRM obere azụmaahịa ga - enyere gị aka iwulite, jikwaa, ma monetize kọntaktị gị.
SmartRequest - ikpo okwu ecommerce iji mee ka ndị ahịa zụta ozugbo na weebụsaịtị gị.
Iguzosi ike n'ihePerks - mmemme iguzosi ike n’ihe nke ndị ahịa iji nyere gị aka ijigide ndị ahịa ma chụpụtakwu ego site na ha.
Tags: akpakanamdejide nyochakọntaktịCRMahịa iguzosi ike n'ihe n'elu ikpo okwunyocha nyocha ndị ahịanyocha ndị ahịaecommerceHealthọrụ ụlọinsurancelocalahia obodompaghara n'elu ikpo okwuiguzosi ike n'iheUchechukwuarịrịọ n'ịntanetịarịrịọ maka ọrụ ịntanetịahịa ịre ụlọNtuziaka n'elu ikpo okwuNtugharireferralsretailenyochaime ụlọobere azụmahịa crmspaWellness